isicelo kuba clarification — Russian uguqulelo — Russian abaqondisi-mthetho
ukuya kwi-ingxelo ekhabhinethi Umlawuli kwi intsebenziswano yamazwe ngamazwe kwi-combating transnational umbutho ulwaphulo-mthetho norhwaphilizo (E CN. elinesihlanu) ababebizwa ngaphandle ukumona ukuba umsebenzi Kwenkomfa States Amaqela ukuba ezimanyeneyo Convention ngokuchasene Urhwaphilizo phantsi kovavanyo ndlela. (E CN. cited imizekelo ka-gama kwi-IPSAS ukuthotyelwa kwemithetho kunye harmonization kwemigaqo-nkqubo uncedo kuvunyelwa ukuba intsimi ii-ofisi ye-physical asethi ukubala kwaye ukucoca phezulu le-asethi database. Amaqela ngokungqinelana Inqaku, isiqendu, okanye sele ezicetywayo ukuba okhethekileyo Intlanganiso States Amaqela kuba convened ngokungqinelana Inqaku, isiqendu. u-asibhozo anesihlanu. ukuba yayo kwesigqibo yi-Anesihlanu Ikomiti, iqumrhu lolawulo wachaza ukuba inkqubo umsebenzi biennium — basenokuba ngakumbi senziwa utshintsho Ikhomishini kwindibano yayo amathandathu-sixth iseshoni, ngo. nayiphi na
private ipropati — Russian uguqulelo — Russian abaqondisi-mthetho
III, Ukuba siganeko wakhokela Unobhala-Jikelele ukuba condemn i-comment kwaye zonke izenzo udushe, kubandakanywa ukusetyenziswa explosive izixhobo kwi-Syrian izixeko ukuba ekujoliswe ubusela, vandalism, olubulalayo kwi abemi kulo emakhayeni abo kwaye zabo iivenkile, ukuze provoke kwaye terrorize nabo kwaye kidnapping ka-abantu kuba ransom, nto leyo ke osetyenziselwa inkxaso terrorist imisebenzi. Njengoko ngexesha ukwakhiwa, Urhulumente Directorate kuba reconstruction nophuhliso lomgaqo-izixeko Osh kwaye Jalal-Abad guaranteed ngokupheleleyo omnye, −. Ngaphezu koko, Urhulumente kuthatha amanyathelo kuba ulungiselelo loluntu noncedo enkulu low-ingeniso iintsapho kwaye omnye abazali faced kunye kwazi bani, ukuxhasa abantwana babo kuba, Njengokuba inxenye yayo eqhubekayo ukufunda nkqubo, IDF sele kanjalo wenza numerous iinguqu zayo
esangezelelweyo ka-esilungileyo — Russian uguqulelo — Russian abaqondisi-mthetho
Inxalenye elinye Inqaku omnye amashumi amabini uwaphinda- ishumi attack a esonyuliweyo kwi phezulu seas kunye injongo seize ukuba esonyuliweyo, okanye izinto kubalulekile oqhuba, okanye kwenzakala nawuphi na umntu kwi bhodi. Wokungasemva mthetho uyilwayo kwakuza ebone kwi -«ngonaphakade ngakumbi ngabemi tendencies ngakulo intolerance, xenophobia kwaye racism kunye Edenmark kwaye ngaphesheya». ishumi Propaganda izenzo, ndaqonda njengokuba systematic» Kuloo meko, inqaku L. yokuziphatha elawula Ingeniso kwaye Yokuhlala ka-Foreigners kwaye Ilungelo Asylum, senziwa utshintsho Umthetho ka-amabini anesine julayi, penalizes, amabini anesine, Inkundla overturned i-benetyala verdict kuba ukona ka-aggravated ubuqhetseba. Kuba imirhumo ye perpetrating kwaye ekubeni criminally elijongene offences ka-peculation yi-ingqikelelo ngenxa yoncedo abantu amaqela,
Ulwaphulo-mthetho abaqondisi-mthetho, Umthetho Firms kwi-Russia kuba Wonke Isixeko — Russian Lamagqwetha-Intanethi
Ukusukela ngo, ifemi sele kuphethwe a libanzi umqolo we assignments kuba Russian Urhulumente. Kwi-Russian abucala, bethu senzo ezijolise imali yentengiso, syndicated iimali-mboleko, kwaye ukudibana acquisitions, kwaye sathi kanjalo lokucebisa kwi-jikelele corporate kwaye litigation imicimbi. Thina amele. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Dechert ke, Moscow-ofisi encompasses isirussian, U. S, isingesi kwaye isininzi-umntu abaqondisi-mthetho abo umsebenzi ngokusondeleleneyo kunye Dechert ke abaqondisi-mthetho kwi-UK, continental Yurophu, i-United States kwaye Asia kwi emnqamlezweni-umda ngamazwe imicimbi. Nabaqondisi-mthetho anike isebenziseke, ushishino-oriented izisombululo. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ngu inkokeli phakathi wamazwe ngamazwe firms, ngokubonelela ishishini umthetho ingcebiso ephezulu umgangatho kulo lonke Yurophu, Kumbindi Mpuma, e-Asia
Ngowesine yonyaka ‘Abafazi Emthethweni’ Ishishini Edition iinkalo zonke ibhinqa attorneys lunxulumano kwi- uhlelo lwemfundiso Eyona abaqondisi-mthetho eamerika, udliwanondlebe Congresswoman Lizzie Fletcher, kwaye ezongezelelweyo editorial isiqulatho covering imiba ebalulekileyo. Ukufumana phandle ukuba yeyiphi i abaqondisi-mthetho baba oku kubandakanya
Russian Prime Umphathiswa Dmitry Medvedev sele esayiniweyo a urhulumente ummiselo ngomhla simplification lomgaqo-nkqubo kuba yokufumana Russian ubumi kuba ezithile amaqela langaphandle entrepreneurs, abatyali-mali kwaye umntu specialists. Utshintsho ezichaphazelekayo kuphela abo businessmen abantliziyo yonyaka ingeniso liwudlule ishumi yezigidi rubles (dollazi) kwaye abatyali-mali abantliziyo share kwi-eyinkunzi ka-Russian iinkampani waba ngaphezu kweshumi ipesenti. ‘Ngenjongo attracting iinqwelo-mali kwi — Russian kuqoqosho, esenziwe lula inkqubo kuba yokufumana Russian ubumi uza nkxalabo langaphandle entrepreneurs kwaye abatyali-mali abantliziyo umsebenzi yi-ibandakanywe Russian classifier ka-iintlobo kwezoqoqosho umsebenzi, kunye abanye ezizodwa, ifunda ummiselo. Omtsha umthetho akazi, umzekelo, kuquka businessmen esebenzayo kulo wholesale urhwebo kunye Saserashiya Ndivuma uza le nkqubo preferential
Wokuqhawula umtshato, isirussian isimbo — Russia Ngaphaya
Ngokunxulumene-manani, wonke wesithathu emtshatweni kwi-Russia kuyaphela kwi-wokuqhawula umtshato yokuqala iminyaka emithathu. Umthombo: Photo cinezela Xa Valery Leeching ke boss onayo ngomhla wakhe nerves omnye kakhulu amaxesha amaninzi, abe punched kuye kwi-lingqina. Leeching waba abalawuli, kodwa waye waziva ngathi a hero -loo mini. I-real zoko yakhe intshukumo wabonakala kuphela emva koko. Valery waqala ukukhangela umsebenzi, kodwa xa wenza isicelo eso kuba imisebenzi, kwezo meko abaqeshi babefuna ezinxulumeneyo. Kwaye xa sukuba ngokuba yakhe yangaphambili indawo umsebenzi, Leeching ke yangaphambili boss wathi ukuba wayeyindoda lousy yabasebenzi. Leeching ke umfazi, Irina, begged kuye ukuba apologize yakhe endala boss kwaye buza umsebenzi wakhe emva.»Phambi kokuba
ipropati ukwahlula — Russian uguqulelo — Russian abaqondisi-mthetho
Nangona ingqalelo imali imfuneko ka-siphuhlisa amazwe ukuze bonwabele ukufikelela nokulawulwa kwamayeza namachiza, ulwazi, iteknoloji kwaye akunakho amalungelo asemthethweni umdla asingawo ngokupheleleyo ithathwe kwi-kwesigqibo, kwaye inkundla izigqibo ngamanye amaxesha akunjalo, ngokufaneleka usetyenzisiwe. ukuba rely kwi uboniso ndlela Ibhodi ke wavuma territorial kwaye lwempahla ethengiswa indlela, enikezela kuba unikezelo kwi-tan-Isibosnian inqanaba ziza kuba Urhulumente nee-arhente ezingamahlakani. ukucwangcisa ezintsha iinjongo ukuba khupha ngakumbi ukukhula kwakhe uzuza ukusuka FDI, kuquka — (a) injecting ukhuphiswano kwi domestic ishishini neenkonzo (b) ukwanda ingeniso kwisizukulwana emisebenzi kwaye (c) ekuphuculeni iindleko kwaye umgangatho iqhosha zophuhliso) b). Ngaphaya koko, unxulumano oluqhubekayo nentsebenziswano iinkqubo malunga abafazi wenziwe rationalized ngapha ubalo
Isirashiya urhulumente uza ‘ququzelela kwakhona’ Otkritie banking iqela. Ngubani ukuba zithetha ukuthini
Russia ke Central Bank sele kwapapashwa i-reorganization ye-banking iqela»Otkritie»omnye oyena-mali amaziko kweli lizwe, kunye amakhulu billions ka-rubles yayo kwi-akhawunti. I-Otkritie banking iqela iqulathe i-bank ngelizwi elinye igama kwaye iibhanki Tochka, Roketbank, Rosgosstrakh Bank, nezinye organizations. Zonke ezi amaziko ngoku uza kuba»rehabilitated»Ewe, reorganization ithetha i-bank ayikwazi kuhlangana nazo zonke iimfuno regulator, i-Russia ke Central Bank, ngaphandle kwemali kwi -«reorganizer»Xa Central Bank ubona a imeko efana nale, oko sele ezimbini iinketho: revoke i-bank u-iphepha-mvume (ekutshabalaliseni i-bank), okanye ququzelela kwakhona kuyo. Njengokuba umthetho, regulators ququzelela kwakhona enkulu iibhanki ukuba ingaba ezibalulekileyo kwi-national okanye jonga umlinganiselo. I-bank kwi umbuzo uba-propati ka-enye, ngakumbi anamandla bank
Ukhuseleko loluntu kwi-Russia: inkqubo, amazinga neemfanelo wachaza — Expat Isikhokelo Russia — Russian abaqondisi-mthetho
Ingaba eligible for ukhuseleko loluntu kwi-Us. Funda malunga Russian yokhuseleko lwezentlalo system kwaye imirhumo, dibanisa njani ukufumana i-Russian yokhuseleko lwezentlalo inani kwaye ibango loluntu nentlalo-ntle ngokolawulo Saserashiya. I-Russia-arhente yokhuseleko lwezentlalo indlela luxanduva urhulumente, ikakhulu overseen yi-Nesebe Lezabasebenzi kwaye intlalontle. Kwezinye iimeko, expats abo kuba wethutyana okanye osisigxina residency anelungelo izibonelelo ihlawulwe yonke yi-arhente yokhuseleko lwezentlalo kwi-Russia, ukuba baya behlawule kuyimfuneko lifike kwi-ethile imali karhulumente. Zombini imali zixhaswa yi-obligatory Russian yokhuseleko lwezentlalo intlawulo ukuba ingaba deducted ukusuka yakho epheleleyo umvuzo, nangona abanye inkcitho kwaye zenkohliso zisebenze kusenokuba exempt ukususela balo. Ungakhetha kwakhona yenza igalelo elongezelelweyo olenza ngokuzithandela ukuba ufuna ukugcina kuba
Intlawulo kwaye izibonelelo unemployed pregnant abafazi kwi-Russia — Umfazi Ka-Trend
Mhlawumbi, wonke pregnant umfazi ngu anomdla izibonelelo ukuba ingaba yokuxhomekeka kumanzi ngomhla wakhe ukususela state. Kwaye ukuba elizayo umama akazange kuba i-esemthethweni umsebenzi, oko kwaba housewife okanye hayi kanti ugqibile kwayo uphando (mbasa a student), ngoko unako enjalo pregnant unemployed nethemba loluntu uncedo. Uyakwazi mba amaxwebhu ukufumana inzuzo kwi-nearest-Ofisi Loluntu Ukukhusela abantu behlabathi (enze udliwano-ndlebe). Nangona kunjalo, intlawulo ukuba ingaba financed ukusuka ezentlalo-ntle i-Inshorensi-Mali (izibonelelo kuba pregnancy kwaye childbirth nabafazi ababekho ebhalisiweyo ngomhla antenatal ekliniki kwi-kwangethuba stages (phambi elinesibini weeks) pregnancy) unemployed pregnant abafazi musa rely, kodwa pregnant student studying kwi-contractual qho ngonyaka we-isigxina kwisebe, banako ukufumana. Kuba pregnant ibhinqa
Izibophelelo kwaye izithintelo ingene ukusebenza emva oyedwa ngu wanika Russian ubumi RC Resident Centre
Zonke Russian abemi ishumi elinesine ubudala okanye nangaphezulu abahlala Us ezifunekayo ukuze ube domestic incwadana yokundwendwela (a ummi ke jikelele incwadana yokundwendwela), xa abo bahlala ngaphandle Us kufuneka ube»langaphandle»incwadana yokundwendwela (a incwadana yokundwendwela kuba ngamazwe ukuhamba) kubalulekile strictly prohibited ukwenza nawuphi na marks kwi incwadana yokundwendwela ukuba musa kuhlangana iimfuno kumiselwe ngumthetho (enjalo marks kuyenza incwadana yakho yokundwendwela igama) Zonke-Russian abemi, ngokunjalo bamazwe angaphandle, ingaba kufuneka ubhalise kwi kwindawo yawo hlala okanye indawo yokuhlala kwi-Russia: Ukuze ukwazi emnqamlezweni i-Russian umda kwaye bahambe internationally, isirussian ummi ezifunekayo ukuze ufumane langaphandle incwadana yokundwendwela (okhethekileyo incwadana yokundwendwela kuba ngamazwe ukuhamba) apho unako kukhutshwa
Ezibanzi zezothutho kwi-Russia
Ukufumaneka zethu kunye fleet ka-nzima trucks, equlathe oludlulileyo European oomatshini, ngokunjalo zethu kunye imveliso isiseko, ivumela Atlanta L inkampani ukulungiselela cargo ukunikela phantse nasiphi na indawo kwi-Russia, significantly ekunciphiseni iindleko ezibanzi zezothutho, ukusombulula abathengi’ traffic imiba njengoko kamsinya kangangoko kunokwenzeka. Ezikhethekileyo ulawulo iinkonzo freight usiya phambili inkampani Atlanta L, ngoncedo oludlulileyo iinkalo zokusebenza, ii-cargo transition kwi-Russia, ngoko ke, ungasoloko ukubuza, apho ifakiwe isithuthi. Kubaluleke ngokukhethekileyo xa transporting high-ixabiso izinto, outsize cargo okanye izinto ezinobungozi. Lokuthengwa kweenkonzo isebe specialists ingaba owenza uphuhliso i-itinerary kuba lezothutho ka-cargo kwi-Lipetsk nezinye izixeko Saserashiya. E-ephezulu elinolwazi umphakamo, abo okuqonda kakhulu efanelekileyo route kuba cargo ezibanzi
Passenger Lezothutho Imigaqo — Abakhweli
Abantwana phantsi ishumi azivumelekanga ukuba utyelele kwi-elide-umgama oololiwe ngaphandle kokuba ekhatshwe i-omdala ngaphandle iimeko pupils okanye abafundi abebezimase namaziko emfundo nge-oololiwe. Ngomhla omnye ticket, i-passenger unako ukuzithwala isandla luggage weighing akukho ngaphezu amathathu anesithandathu kg (okanye amashumi amahlanu kg kwi-carriages kunye u-berth compartments (sleeper carriages) simahla. I isixa kwesandla luggage abathathu imilinganiso kufuneka ingabi zingaphezu cm. Ukongeza kwi-permitted isandla luggage, ngamnye passenger ovumelekileyo ukuba thatha briefcase, handbag, binoculars, skis kwaye ski amachaphaza, fishing rods, ikhamera, umbrella, nezinye izinto ezincinane simahla anike isixa ezintathu imilinganiso akusebenzi zingaphezu anamashumi cm. I-limisele imithetho kwi isandla luggage vumela abakhweli elide kwi-umgama oololiwe ukuthatha prams,
Intellectual property kwi-Russia — Iinkonzo — Accountant Us
Russian IP umyalelo wokhuselo ilawulwa yi-Inxalenye IV ye-Russian Zasekuhlaleni Ikhowudi, ezithile federal imithetho kunjalo dozens ngamazwe treaties kwi-intellectual ipropati amalungelo watyikitywa Saserashiya. Umzekelo, Inkundla kuba Intellectual Property Amalungelo yamiselwa kwi-Russia kwi- kuphela kwiminyaka emithathu edlulileyo. Le inkundla uqwalasela exclusively disputes enxulumene intellectual property amalungelo nokuba amaqela abandakanyeka ityala waza wakhonza njengoko wo- isehlo ngokunjalo cassation inkundla kuba naziphi iimeko ukuba examines okanye ukuba ezicingelwa nangayiphina enye imeko abarhwebayo inkundla kwi-Us. Russian IP imithetho ukulawula i-patents ebhalisiweyo kuba inventions, into eluncedo models kwaye mveliso designs Patents ingaba esikhutshwe Federal Inkonzo ye-Intellectual Property, Patents kwaye iimpawu zokurhweba, awathi kanjalo eliphathiswe nokubhalisa iimpawu
Ithatha a Forex Dealer sephepha-mvume ukuba Urhwebo ukusetyenziswa kwemali kwi-Russia - Jus Privatum